क्याम्पस भित्र राजनीतिक ज्याकेट लगाउन दिन्नः अनन्त पौडेल, अध्यक्ष, मकवानपुर वहुमुखी क्याम्पस « News24 : Premium News Channel
क्याम्पस भित्र राजनीतिक ज्याकेट लगाउन दिन्नः अनन्त पौडेल, अध्यक्ष, मकवानपुर वहुमुखी क्याम्पस
मकवानपुर जिल्लाको सबैभन्दा जेठो मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको १४ औं क्याम्पस सभा गत भदौ २३ गते सम्पन्न भएको छ । क्याम्पसमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अध्यक्ष रहेका थिए । मुख्यमन्त्री भएपछि पौडेलले कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा पूर्व सभासद अनन्त पौडेललाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा सुम्पेका थिए । सभाले क्याम्पसका बर्तमान कार्यबाहक अध्यक्ष अनन्त पौडेललाई निर्विरोध अध्यक्षका रुपमा चयन गरेको छ ।
क्याम्पस विधान अनुसार १७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा ९ जना बाहेक अन्य सदस्यहरु जिल्लाका संघसंस्थाका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । अध्यक्ष बाहेक बाँकी ८ जनाका लागि १४ जनाको उम्मेदवारी परेकाले आगामी २८ गते निर्वाचन हुने जनाईएको छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर टिभी जर्नलिष्ट देवराज पन्तले न्यूज २४ का लागि क्याम्पसको समग्र विषयमा अध्यक्ष अनन्त पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सर्वप्रथम तपाईलाई बधाई छ ।
तपाई भन्दा बाहेक अध्यक्षको दाबेदार कोही भएनन्, त्यही भएर निर्विरोध हुनु भयो । निर्विरोध भएर पदमा पुगेपछि तानाशाही, आफ्नो विचार मात्रै लाद्न खोज्ने हुन्छ भनिन्छ नि ?
म तेस्तो मान्दिन, म आफूलाई सबैको सहयोगबाट अध्यक्ष भएको ठानेको छु । कसैले नसकेर, कोही प्रतिष्र्पर्धी नभएर म निर्विरोध भएको होईन । सबैले मेरो नेतृत्वमा क्याम्पस सञ्चालन गरौं भन्ने सर्वसम्मत र सहयोगबाट भएको हुँ । जहाँसम्म तानाशाही वा आफूलाई मन परेको मात्रै गर्ने कुरोछ, त्यस्तो त कदापि हुने छैन ।
तपाई कार्यवाहक अध्यक्ष भैसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । पक्कै पनि अध्यक्षको भूमिका, चुनौती र समाधानको बारेमा जानकार नै हुनुहुन्छ । अब त अध्यक्ष नै भईसक्नु भयो । क्याम्पस व्यवस्थापन, विकास, शैक्षिक गुणस्तर जस्ता कार्यका लागि के के योजनाहरु छन् ?
हेर्नुस््, हामीसँग अहिले बग्रेल्ती समस्याहरु छन् । सबैभन्दा पहिलो त हामी आधुनिक शिक्षण सिकाईलाई व्यवस्थापन गर्छौं । हाल क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर अब्बल भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मापनमा सफल भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनु र अझ परिष्कृत गर्नु मेरो कार्यसूचीमा राखेको छु । हाल यो क्याम्पसमा जिल्ला बाहिरका विद्यार्थीहरुको समेत आकर्षण विन्दु बनेको छ । त्यतिमात्र नभइ यो सामुदायिक संस्था हो, यसको व्यवस्थापन सबैको सामुहिक निर्णयबाट सञ्चालन हुन्छ ।
अर्को कुरा हाम्रोमा आउने विद्यार्थीहरुमध्ये गरीब, पिछडिएका समुदाय, द्वन्दबाट पीडित परिवार, अपाङ्ग, दलित, किसानका सन्तानलाई सहुलियत रुपमा अध्ययन गराउनु सामुदायिक क्याम्पसको दायित्व भित्र पर्छ । क्याम्पसको आम्दानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आउने रकम बाहेक विद्यार्थी शुल्क मात्रै हो । जिल्लाका करीब ३० वटा क्याम्पसको विद्यार्थी शुल्क भन्दा हामी सस्तोमा अध्यापन गराईरहेका छौं । यो सबै व्यवस्थापन आफैमा चुनौती हो । म यसलाई व्यवस्थापन गर्छु । यसका साथै व्यवस्थापन मात्रै होईन यसपटक क्याम्पस प्रशासनको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुँदैछ । अब क्याम्पसमा एउटा सक्षम र जागरुक टिम बन्दैछ । यसबाट पनि म आशावादी छु । क्याम्पसको व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ ।
क्याम्पसको प्रशासन प्रमुख परिवर्तन हुने कुरो गर्नु भो, नयाँ अनुहार आउने हो कि ?
हो, नयाँ अनुहार नै आउने हो । अहिलेसम्म क्याम्पस भित्रैबाट सक्षम व्यक्ति आउने सम्मको छलफल भएको छ । बाहिरबाट ल्याउँदा उहाँलाई क्याम्पसको बारेमा बुझन पनि केही समय लाग्ने, फेरि त्यो क्याम्पसले आर्थिक रुपले धान्न सक्ने अवस्था पनि बनिसकेको छैन । क्याम्पस भित्रैबाट प्रशासन प्रमुख ल्याईएपनि नयाँ अनुहार आएपनि उहाँको कार्यशैलीलाई विचार गरेर मात्रै भोलि स्थायित्व गरी अघि बढ्ने सोचाई छ । काम गर्ने सन्दर्भमा म स्ट्रिक्ली छु ।
केही समय अघि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउने योजना भन्ने सुनिएको थियो । नयाँ व्यवस्थापनले के सोचेको छ ?
हामीले यो विषयमा त्रिविविलाई प्रतिवेदन पनि दिईसकेका छौं । एमबिए कक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर डिनलाई बुझाएका छौं । त्यसै गरी बिई, एलएलबीको पाठ्यक्रमको तयारीमा छौं । एमएड, पाठ्यक्रम त प्रक्रियामै गैसकेको छ, सम्भवत आउँदो शैक्षिक सत्रबाट त्यो लागू हुन्छ । एमएस्सीको पनि तयारीमा छौं । यसरी पाँचसातबटा विषयको स्नातकोत्तर अध्यापन हुन लागे सकेपछि विश्वविद्यालयको आधार तयार हुन्छ । तर चुनौती कहाँ हो भने, त्यसको लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौती हो ।
विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिकाऊ हुनु पर्छ । हुनत हामी दोश्रोपटक क्यूएई सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेकाले प्राविधिक रुपमा हामी सक्षम छौं । तर हाम्रा प्रज्ञिकहरु, प्रोफेसरहरुले लेखेका जर्नलहरु, अनुसन्धानहरु विश्वमा कत्तिको भ्यालुएवल छन् त त्यो पनि हेर्नु पर्छ । हुनत यसका लागि हामीले अहिलेका प्राध्यापकलाई अध्ययन विदा सहित एमफिल, पिएचडी गर्न सुविधा दिएका पनि छौं । यो हाम्रो विश्वविद्यालयको अवधारणबाट नै आएको हो । अहिले त्रिविविले उपत्यका बाहिर बिबिएम र बिबिए अध्यापन गराउने सीमित क्याम्पसमा मकवानपुर क्याम्पस परेको छ । विविएम उत्तीर्ण विद्यार्थी त कोही पनि बेरोजगार छैनन् । यसरी उपत्यका बाहिर पनि राम्रो पढाई हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बजबुत गराउन सक्यौं भो हामीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं ।
यति कुरा गरिरहँदा विश्वविद्यालयका लागि चाहिने प्रोफेसर, डाक्टर जनशक्ति जिल्लामा छन् त ? यसका लागि त पक्कै पनि जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ला नि ?
हो, त्यसका लागि आर्थिक श्रोत आवश्यक रहन्छ । त्यतिमात्रै कहाँ होर, थप भौतिक पूर्वाधार, जमीन, मानवसंशाधन सबैको आवश्यकता पर्छ । अहिलेको भौतिक पूर्वाधारले यसलाई थेग्न सक्दैन । यसका लागि हामीले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध पनि गरिसकेका छौं । अबको सञ्चालक समितिले प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि प्रस्तावना पेश गर्दैछ । प्रदेश विश्वविद्यालयको अवधारणालाई प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय त गरेको छैन ।
केही समय अघि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्णय त गरिसकेको पनि छ । २०३७ साल देखिको पुरानो यस बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेश विश्वद्यिालयका रुपमा अघि बढाउन सके ज्यादै उपर्युक्त पनि हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारले यति गर्न सके मानव श्रोत जुटाउन हामीलाई सजिलो हुने थियो । भारत मै पनि कतिपय प्रान्तहरुमा ४ हजार विद्यार्थी भएको क्याम्पसलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने गरेको छ । उनीहरु आफै पाठ्यक्रम बनाएर अध्यापन गराउँछन् । बजारमा त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति बजारमा बिक्री पनि भर्यरहेका छन् ।
तपाईको अबको ४ बर्षे कार्यकालमा क्याम्पसले कस्तो सकारात्मक विकास पाउँछ ?
हेर्नुस्, यो बहुमुखी क्याम्पस मूलत व्यवस्थापन क्याम्पस हो । त्यो भएता पनि हामीले मानविकी, विज्ञान जस्ता विषयमा पनि अध्यापन गराईरहेका छौं । मूलत व्यवस्थापन क्याम्पस भएकाले हामी सोही विषयका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन्छौं । उपत्यका बाहिरको क्याम्पसमा व्यवस्थापनका राम्रा विद्यार्थी उत्पादन हुने क्याम्पसमा दर्ज हुन चाहन्छौं । हुन त, अन्य विषयमा ध्यान नदिने भन्न खोजेको होईन, तर लक्ष्य किटान गर्नु पर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापन विषयलाई बढी ध्यान दिने छौं । यसैकुरालाई दृष्टिगत गरी एमबिएको पाठ्यक्रमको प्रस्तावना पेश पनि गरिसकेका छौं । हाम्रो चाहना व्यवस्थापन विषयको हब बनोस् भन्ने नै हो ।
केही समय अघि केही सञ्चारमाध्यममा क्याम्पस व्यवस्थापन, प्राध्यापकहरुको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी आएका थिए । यसलाई कसरी निराकरण गर्नुहुन्छ ?
हो, मलाई सबै थाहा छ । क्याम्पसको विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका विषयले साच्चै नै म गम्भीर छु । आउनु हुदैनथ्यो । प्राध्यापक, कर्मचारीहरुले पनि क्याम्पसको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको पनि देखेको छु । हामी अब यसलाई नियमन गर्छौं, अनुशासनको नीति नै बनाउँदै छौं ।
कोड अफ कण्डक्टमा बस्ने वातावरण मिलाउँछौं । शिक्षक, प्राध्यापकको नियुक्तिमा अपारदर्शी भयो, गलत ढङ्गले नियुक्ति गरियो, राजनीतिक चलखेल भयो भन्ने आरोप सहितको विषयमा पनि समाचार आएको छ । हेर्दै जानुस्, अब हामी यो टिप्पणी पूर्णरुपमा नआउने गराउँछौं । मेरो कुनै स्वार्थ छैन । सामाजिक सेवाको रुपमा लिएको छु यो जिम्मेवारीलाई मैले । आफैले पढेको क्याम्पस पनि हो । यसलाई राम्रो गर्नु मेरो पनि दायित्व हो नि । अर्को कुरो, सामुदायिकको मुख्य समस्या ३ वटा हुँदा रैछन् । पहिलो विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस सरह शुल्क तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुँदो रैछ । दोश्रो, शिक्षक प्राध्यापकहरुको त्रिभुवन विश्वविद्यालले आफ्ना कर्मचारी, प्राध्यापकलाई दिने सबै सुविधा पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुँदो रैछ ।
अनि तेश्रो चाही अभिभावकको चाहना चाही नाम कहलिएका निजी क्याम्पसको सरहको रिजल्ट होस् भन्ने हुँदो रैछ । अब यो विषय आफैमा विरोधाभास् हुन्छन् । विद्यार्थी शुल्क बढाउन चाहदैन, शुल्क वृद्धि हुनासाथ आन्दोलन व्यहोर्नु पर्छ । क्याम्पसको आयश्रोत कमजोर भएकाले प्राध्यापकको इच्छा चाहेर पनि पूरा गर्न सकेका छैनौं, अभिभावकको चाहना बमोजिमको रिजल्ट दिन पनि चुनौती छ । सामुदायिक क्याम्पस भएकाले यहाँ विद्यार्थी संगठनले राजनैतिक गतिविधि गर्न पनि पाउँछ, विभिन्न राजनैतिक दलको भातृ संगठनले पनि आफ्नो राजनैतिक गतिविधि गरेका हुन्छन् । जुन कुरा निजी क्याम्पसमा गर्न छुट छैन । तर सामुदायिक क्याम्पसले सबै भोग्नु पर्छ, एक्लो निर्णय गर्नै सकिन्न । सबैको साथ समर्थन जुटाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । तर, हामी मिलाएर लैजान्छौं ।
पछिल्लो समयमा सरकारले सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गराउनेको सन्तान पनि सामुदायिक संस्थामा नै अध्यापन गराउने नीति ल्याएको छ । क्याम्पसमा अध्यापन गराउने प्राध्यापक, कर्मचारीको छोराछोरीलाई पनि सोही क्याम्पसमा पढाउनु पर्छ भन्ने नीति नै ल्याउँदै छ, भन्ने सुनिन्छ नि ?
मैले अघि अनुशासनको विषयमा थोरै चर्चा पनि गरेको छु । हामी प्राध्यापक, कर्मचारीलाई नैतिक रुपमा पनि जिम्मेवार बनाउदै छौं । आफूले पढाउने शैक्षिक संस्थामा नपढाउनु भनेको सो संस्था प्रतिको अविश्वास भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले, यसलाई हामी कोड अफ कण्डक्ट भित्र यो विषय राख्ने योजनामा छौं ।
सामुदायिक संस्थाको व्यवस्थापन पक्षमा विभिन्न राजनीतिक आस्था बोकेका व्यक्तिहरु हुन्छन् । सबैको आफ्नै सिद्धान्त, चाहना होलान् । मिलाएर लैजानु चुनौतीपूर्ण होला नि ?
पक्कै पनि हो । यस विषयमा म के भन्छु भने, क्याम्पस बाहिर आफ्नो आस्था अनुसारको कार्य गर्नुस् । त्यो पनि सामाजिक कार्य नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ । तर क्याम्पस प्रवेश गर्दा राजनीतिक आस्थाको ज्याकेट बाहिरै फुकालेर प्रवेश गरौं । क्याम्पस भित्र प्राध्यापकको वृत्ति विकासमा, विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नतिको सवालमा राजनैतिक आस्थाको कारण कही कतै पक्षपात हुने छैन ।
यदि यसलाई हामी सबैले ध्यान नदिने हो भने, क्याम्पसमा गुट, उपगुट बन्न थाल्ने छन् । यसलाई निराकरण गर्न म पहिलो बैठकबाटै यस विषयलाई छलफलमा लैजाने योजनामा छु । विगतमा म हेटौंडा वडा नम्बर ९ को तत्कालिन प्रगति निमाविको व्यवस्थापनको अध्यक्ष भएको २३ बर्षे अनुभव छ र उच्च मावि भएपछि मैले समय दिन नसक्ने भउपछि आफैले छोडेको हुँ ।
मैले त्यहाँ पनि विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो नबनाऊँ, राजनीति गर्ने थलो बाहिर प्रशस्तै छ भन्ने गरेको थिएँ । त्यसैले म भन्छु, हामी क्याम्पसमा विशुद्ध स्वयम् सेवकको रुपमा आएका हौं । क्याम्पस भित्र आईसकेपछि, हाम्रो आस्थाको केन्द्रबिन्दु क्याम्पस हो भन्ने हामी सबैले मनन् गर्नुपर्छ । यति गर्न मेरो नेतृत्वमा भरमग्दुर प्रयत्न गर्छु ।
अन्तमा क्याम्पस अध्यक्षको रुपमा मकवानपुरवासीलाई के सन्देश दिनु हुन्छ ?
हामी अहिले निजी क्याम्पसभन्दा ३ गुणा सस्तो शुल्कमा अध्यापन गराईरहेका छौं । अर्को कुरा हाम्रा प्रध्यापकहरु दक्ष छन् । क्याम्पसमा आईसकेपछि प्राध्यापकले दिएको मार्गनिर्देशनलाई क्याम्पस भित्र पालना गराउने हाम्रो अभिभारा हो । क्याम्पस बाहिर आफ्ना छोराछोरीको संगत कस्तो छ, के गरिरहेका छन् भन्ने ख्याल गरिदिने, बेलाबेलामा आफ्ना छोराछोरीको पढाईको सन्दर्भमा क्याम्पस आईदिन अनुरोध गर्दछु ।
म भन्छु, आर्थिक कारणले कुनै पनि विद्यार्थी अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस् । हामी त्यो हुन दिदैनौं । मकवानपुरवासीले योे क्याम्पसलाई शैक्षिक धरोहरका रुपमा अघि बढाउन पहल गरौं । क्याम्पस भित्रको शैक्षिक वातावरण मिलाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो, बाहिरी वातावरण मिलाई दिने मकवानपुरबासीको हातमा छ । आफ्ना सन्ततिलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा पढाउन पहल गरौं । सबैको साथ र सहयोग भयो भने पक्कै पनि यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ ।
विवाह गर्नु सबैभन्दा गलत काम हाे भन्ने धारणाले आनी बन्न पुगेँ : आनी छोइङ डोल्मा (भिडियाे)
प्रविधिको प्रयोगपछि नेपालमा मौसमको भविष्यवाणी ‘एक्युरेट’ छ : वरिष्ठ मौसमविद् राजेन्द्र श्रेष्ठ